ललितानिवास जग्गा प्रकरण : अनुसन्धानका लागि दुई महिना थप्न प्रस्ताव Archives - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
एक समय थियो, सोभियत रुसमा घाम लाग्दा या चीनमा पानी पर्दा नेपालका कम्युनिष्ट युवा वाद-विवादमा उत्रिन्थे । कम्युनिष्ट पार्टी कस्तो हुनु पर्छ ? कसरी कम्युनिष्ट क्रान्ति सम्पन्न गर्नु पर्छ ? भन्ने सवाल
सहाना प्रधान वि.स. १९८४ मा नेपालको राजधानी काठमाडौँको असनमा जन्मिएकी थिइन् । सहाना प्रधान बाजे बजै,काकाकाकी सहितको विस्तारित परिवारमा जन्मेर हुर्किन् । मध्यम वर्गीय काठको व्यापारी भएको कारण बाजे र बु
काठमाडौं । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा रहेको कोरोना भाइरस संक्रमणबाट काठमाडौंका दुई सहित तीन जनाको निधन भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गाैतमका अनुसार काठमाडौँ महानग
काठमाडाैं । पछिल्लाे २४ घण्टामा थप ७० जनामा काेराेना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएकाे छ । याे सँगै नेपालमा काेराेना संक्रमितकाे संख्या १६ हजार ७१९ पुगेकाे स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जाग
काठमाडौं । चर्चित ३३ किलो सुन प्रकरणका एक आरोपीलाई युएईबाट नेपाल ल्याएको छ ।शनिबार ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा संग्लग्न रहेको आरोपमा गत माघमा युएईमा समातिएका उनलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी आज नेपाल ल
काठमाडौं । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा रहेको कोरोना भाइरस संक्रमणबाट काठमाडौंका दुई सहित तीन जनाको निधन भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प
एक समय थियो, सोभियत रुसमा घाम लाग्दा या चीनमा पानी
डा. गोविन्दबहादुर थापा- वरिष्ठ अर्थविद्
सनद देवकाेटा-वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वाेच्च अदालत
लोकसेवा आयोगले नेपाल बैंकका लागि लिएको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । आयोगले सञ्चालन गरेको सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा बैंकले बिहीबार स...
काठमाडौं । नेपालका युवा लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले सिजनको क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सिपिएल) टी-२० क्रिकेट प्रतियोगिता जमैका तलावाजबाट खेल्ने भएका छन्...
एजेन्सी । कोरोना भाइरसको बारेमा नयाँ महत्वपूर्ण दावी गरिएको छ। २०० भन्दा बढी वैज्ञानिकहरूले दाबी गरे कि कोरोनाभाइरस हावामा पनि फैलिन सक्छ। यसको मतलब य...
एजेन्सी । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) लाई चेतावनी दिएका छनकि लिबियाको द्वन्द्व नयाँ चरणम...
काठमाडौं । भारतीय सीमारक्षामा खटिएका एक गोर्खा सैनिकको पाकिस्तानी सेनाको गोली लागेर मृत्यु भएको छ । शुक्रबार बिहान जम्मू–कश्मीरको लाइन अफ् कन्ट्रोल (...